सावधान ! यसरी लुट्छ सहकारीले ऋणी, महिनौं वित्दा पनि पाएनन मानवीय सहकारी पीडितले न्याय
सोझासाझा झुक्याउँदै लाखौंको सम्पत्ति झ्वाम नाम मानवीय सहकारी तर, व्यवहार भने अमानवीय । घटना काठमाडौंको बसन्तपुरमा रहेको मानवीय सहकारी संस्था लिमिटेडबाट भएको ठगीको हो । हामीले यसअघि पनि यो विषय उजागर गरेका थियौं । तर, आफूले गलत नगर्ने बताउने सहकारीले अझैपनि पीडितलाई भने न्याय दिन सकेको छैन । यस्तो छ ठगीको वास्तविकता पीडित पक्ष भनिएका […]
एनसेलसँग ६१ अर्ब राजश्व उठाइने अर्थमन्त्रीको दाबी
काठमाडौँ । अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडाले निजी मोवाइल सेवा प्रदायक एनसेल प्राइभेट लिमिटेडको सम्पत्ति तथा दायित्व मूल्याँकन (डीडीए) गरेर ६१ अर्ब रुपैयाँ कर असुली गर्ने बताउनुभएको छ । प्रतिनिधीसभा अन्तर्गतको अर्थ समितिको मंगलबारको बैठकमा उहाले जसरी भएपनि कर असुल गर्ने बताउनुभयो । खतिवडाले एनसेलले तिर्नुपर्ने करबारे विवाद हुँदै गर्दा उसले विदेश लैजाने लाभांश नरोक्न सर्वोच्च […]
काठमाडाैं । राजधानीको न्युरोडस्थित हमाल जेम्स एन्ड ज्वेलर्सले ग्राहकसँग गहना अर्डर नलिएको दुई साता भयो । बजारमा ढिका सुन किन्न नपाएपछि उसले ग्राहकलाई फिर्ता पठाईरहेको छ । माग अनुसार बैकबाट सुन नपाउँदा अर्डर लिन नसकेको यसका सञ्चालक दाना हमालले बताईन् । तिज आउन लागकोले गहनाको माग बढ्दो छ, उनले भनिन्, बैंकले मागे जति सुन् नदिएपछि […]
काठमाडौ । विश्व बैंकले नेपाललाई वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्व र विकासका लागि १० करोड अमेरिकी डलर ऋण सहयोग स्वीकृत गरेको छ । सन् २०१३ मा शुरु भएको वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्व विकास नीति क्रेडिट (डीपीसी) लाई निरन्तरता दिंदै बैंकको बोर्डले पुनः यो सहयोग स्विकृत गरेको हो । विश्व बैंकले नेपालका लागि तयार गरेको पाँचवर्षे सहायता साझेदारी रणनीति […]
काठमाडाैँ । संघीयताको स्थिर मार्ग सुनिश्चित गर्दै समावेशी र समृद्ध भविष्य निर्माणका लागि विश्व बैंकले १० करोड अमेरिकी डलरको चौथो वित्तीय क्षेत्र स्थिरता विकास नीति कर्जा अनुमोदन गरेको छ । अमेरिका भ्रमणमा रहेका अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा र विश्व बैंक समूहको कार्यकारी निर्देशकहरुको बोर्डले नेपालका लागि आगामी पाँच वर्षको कन्ट्री पार्टनरसिप फ्रेमवर्क (सिपिएफ) मा छलफल गरेपछि यो […]
विश्व बैंकले नेपाललाई वार्षिक १५ प्रतिशतले सहयोग बढाउने
काठमाडौं । विश्व बैंकले नेपाललाई गर्दै आएको दीर्घकालीन सहयोग वार्षिक कम्तिमा १५ प्रतिशतले बढाउने भएको छ । नेपालमा वार्षिक ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिका लागि सबैभन्दा ठुलो बहुपक्षीय दातृ निकायले आफ्नो सहयोग बढाउने भएको हो । नेपालमा विश्व बैंकको सहयोगको पोर्टफोलियो २ अर्ब ७० करोड अमेरिकी डलरभन्दा धेरै छ । उसको सहयोगमा २३ वटा आयोजना चलिरहेका […]
काठमाडाैं । आयात उच्च र निराशजनक निर्यातले गत आर्थिक बर्ष १ सय २८ मुलुकसँग ब्यापार घाटा भएको छ । भन्सार विभागका अनुसार १ सय ५५ मुलुकहरुसँग नेपालले आयात र निर्यात ब्यापार गरेको थियो । यसमध्ये साढे ८५ प्रतिशत मुलुकहरुबाट नेपालले निर्यातभन्दा बढी आयात गरेको छ । आयातभन्दा बढी निर्यात बढी भएका मुलुकहरु २८ मात्रै छन् […]
काठमाडौं – डेरी उद्योगले उत्पादन गरेको करिब चार अर्ब रुपैयाँको घिउ बिक्री नभएपछि उद्योगी चिन्तित भएका छन् । न्यून बिजकीकरण र चोरी पैठारी भएर भारतबाट आयात भएको घिउसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेपछि घिउ बिक्री नभएको डेरी सञ्चालकको भनाइ छ। करिब चार अर्ब रुपैयाँको घीउ बिक्री नभएपछि स्टक रहेको नेपाल डेरी एसोसिएसनले जनाएको छ । घिउ बिक्री […]
काठमाडौं – नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले देखाएको नाफामै महालेखाले आशंका व्यक्त गरिरहेको बेला सञ्चालन समितिले भने फेरि कर्मचारीलाई करोडौं बोनस बाँड्ने निर्णय गरेको छ । महालेखाको ५५ औं बार्षिक प्रतिवेदनमा नाफा सम्बन्धमा फरक फरक हिसाब आएकोले कर्मचारीलाई वोनस वितरण गर्नु गैरकानुनी हुने उल्लेख छ । तर, प्राधिकरण सञ्चालन समितिले केही साता अघि वोनस वितरणको निर्णय गर्दै […]
काठमाडौं – सरकारले चालू आर्थिक बर्षदेखि लागू हुने गरी सवारीसाधनको अन्तःशुल्क इन्जिन क्षमताअनुसार निर्धारण गरेपछि महँगाा सवारीसाधनको मूल्य उल्लेख्य रुपमा वृद्धि भएको छ । दुईपाङ्ग्रे सवारीमा २ हजारदेखि ४ लाख रुपैयाँसम्म वृद्धि भएको छ । भने चारपाङ्ग्रे सवारीमा ५० लाख रुपैयाँसम्म बढेको देखिन्छ । बजेटमार्फत चारपाङ्ग्रे तथा दुईपाङ्ग्रे सवारीमा इन्जिन क्षमताका आधारमा ५ प्रतिशत विन्दुदेखि […]